FAQ : Fanontaniana ombieny | Informatika Malagasy
FAQ : Fanontaniana ombieny Posted October 2nd, 2007 by adler Mila fenoina tsikelikely
Natao ho an'iza ny IFG ?
Ny infogasy.net dia natao ho an'ny malagasy rehetra, na tsy malagasy koa aza, ka mikirakira ny informatika amin'ny asany na ny fianarany na ny fiainany andavanandro. Misokatra ho an'ireo maty hanina, ary misokatra ho an'ireo vao mianatra. Izay rehetra afaka mifanampy, mifampizara fahalalana, traikefa, fikafika, vaovao sns dia tonga soa daholo.
Ahoana ny tantaran'ny IFG ?
Ny tantaran'ny sehatra : Jereo eto.
Misy raki-peo ihany koa
Ankoatr'izay dia misy blaogy ahitana ny manodidina ny sehatra
Inona daholo no zava-misy eto amin'ny ifg ?
- Sehatra serasera: ahitana ny dinika forum, ireo vaovao tetsy sy teroa, vaovao farany avy amin'ireo sehatra malagasy hafa ao amin'ny fahana RSS, ary vao nasiana Chat koa
- Sehatra fivelarana: afaka hijerena na hametrahana antso sy filazana. Resaka tolotra sy fitadiavana asa moa no isan'ny kendrena amin'izany, fa ao koa ny tolotra sy fitadiavana tsena
- Tahirin-kevitra: ao amin'ny wiki misy tahirin-kevitra natao amin'ny teny malagasy ho an'ny malagasy, izay efa misy ventiny ihany, fa mbola betsaka ny tokony hampiana sy hatsaraina.
- Vondrona IFG: fitambaran'izay mazoto hiara-hianatra sy hiasa amin'ny teknolojia malaza amin'izao. Efa misy ny vondrona PHP, vondrona DotNet, ary vondrona Java.
- Gazety IFG : angona tahirin-kevitra sy rindrankajy karakarain'ny IFG ho an'ny malagasin'i Madagasikara. Izay te-hindrana na handika dia afaka miantso ny tompon'andraikitra, Mr Mahefa amin'ny 0 3 3 1 1 7 4 3 1 4
Ahoana ny fandraisana anjara amin'ny infogasy.net ?
Ny olona rehetra dia afaka mijery sy mamaky ny takelaky ny infogasy rehetra. Saingy noho ny antony securité dia noferana ho izay efa nisoratra anarana ihany no afaka manisy tsikera an'ireo karazan-dahatsoratra, manoratra ao amin'ny forum sy ny wiki.
Mila mahazo alalana ho "author" anefa vao afaka manoratra zavatra hafa toy ny article na breve
Ahoana ny hahazoana alalana ho 'author' ?
Mila mangataka fotsiny. Mba tsy hiandrasana andro foana anefa, dia azonao tonga dia atao ao amin'ny forum ny article tianao hapetraka. Rehefa hitan'ny admin iny, dia homena anao ny alalana, ary azo afindra mora foana any amin'ny rubrique sahaza azy ny lahatsoratrao.
Ahoana ny momba ny vohikala IFG ?
- Drupal no mitondra ny portal
- Dokuwiki no mitondra ny wiki
Misokatra amin'ny fanamarihana sy soso-kevitra hatrany
Ahoana raha te-hifandray amin'ny admin ?
Ny tsara dia ny manoratra ao amin'ny forum Momba ny sehatra IFG. Raha zavatra tsy azo aseho forum no tianao horesahana (mety hoe resaka securité na hafa) dia azo atao ny mandefa mailaka amin'ny : contact_at_infogasy_dot_net